NextMapping | Ny ho avin'ny asa | Cheryl Cran
Ahoana ny NextMapping™ asa
Mampiasa paikady manan-danja hanampiana anao hitety ny ny ho avy asa - manampy anao izahay hamantatra ny manaraka ny orinasa, ny mpitarika ary ny ekipanao ary manomana izay tokony hatao vonona amin'ny ho avy ankehitriny.
Iza no manampy antsika
Vonona ho amin'ny zavatra ho avy ve ny mpitondra anao? Manana ‘fahaiza-manao ho avy’ ve ny mpitondra ataonao hitarika ireo fanovana ilaina hahatongavana any? Manana vahaolana mitambatra isika hanampiana ireo mpitondra ho vonona amin'ny ho avy.
Mivadika sy manova ve ny ekipa ekenao? Manana fitaovana izahay hanampiana ny ekipanao ho mpitondra fiovana novana izay mamorona ny ho avy ho avy.
Mpandraharaha vonona ho avy ve ianao? Na orinasa efa raikitra ianao na fanombohana dia afaka manampy anao hamaky izay ho avy.
Serivisy stratejika atolontsika
Mianara mitaky sy amin'ny tena fotoana.
Ny fandaharam-potoana mihetsika amin'ny alàlan'ny safidy hiasa miaraka amin'ny NextMapping™ mpanazatra.
Ampio ny mpitarika sy ny ekipanao ho vonona amin'ny ho avy sy ny paikady farany indrindra.
Ny fitaomam-panahy, ny fikarohana, ny paikady azo ampiasaina ary ny votoatin'ny vinavina no azonao rehefa miasa miaraka amin'i Cheryl Cran ianao ho mpiteny manan-danja ho an'ny hetsika virtoaly na hetsika mivantana. Namboarina sy interactive.
Ny fotoana tsy fantatra dia mila loharano tsara indrindra ho an'ny mpitondra sy ekipa. Miaraha miasa amin'ny NextMapping voamarina™ mpanazatra hampiakatra ny fahaiza-mitarika, hampitombo ny fisainana stratejika ary manatsara ny fahombiazan'ny mpiasa lavitra.
Amin'ny maha orinasa mpanolo-tsaina boutique anay dia miara-miasa amin'ny orinasa kely sy mpandraharaha madinika isika mba hanaporofoana ny orinasa amin'ny ho avy
ary manangana tombony mifaninana, manentana ny zava-misy any an-tany lavitra sy manatanteraka ny fanovana fitantanana.
Ny 75% an'ny CEO dia milaza ny tsy fahampian'ny mpiasa mahay noho ny elanelana lehibe amin'ny maha-fikambanana azy.
Amin'ny NextMapping™ dia manome safidy sy fomba fiofanana isan-karazany izahay hanampiana amin'ny fanitarana ny elanelan'ireo mpitarika sy ekipanao.
Hitan'ny fikarohana fa ny mpitarika sy ny mpandraharaha dia mahazo vina stratejika sy hevitra mahomby ary vahaolana mahomby
rehefa mirotsaka amin'ireo vondrona mpinamana kely. NextMapping manokana™ Ny fisintonana dia amin'ny alàlan'ny fampiharana fotsiny.
Zahao ny fanavaozantsika farany
Ny hoavin'ny fahombiazan'ny asa dia tsy miankina amin'ny iray na roa mahery fo amin'ny orinasa - ny ho avy dia momba ny 'isika' ary ny fomba hanavaozana sy hamoronana ny hafainganan'ny fanovana.
Mamandraha izao amin'ny fihenam-bidy 50%
Ny maha-zava-dehibe ny branding mandritra ny krizy sy ny fomba hamoizana ny orinasanao
Cheryl dia niresaka tamin'i Brad Breininger, mpiara-manorina ary mpamolavola stratejika ao amin'ny Zync momba ny ho avin'ny branding sy ny ara-dalàna vaovao.
Izahay amin'ity taona ity dia mizara ny fironana momba ny toeram-piasana 21 NextMapping ho an'ny 2021 amin'ny alàlan'ny slalomare. Covid19 sy 2020 dia nisy fiantraikany mandrakizay tamin'ny fomba fiasantsika sy ny fomba fiainantsika. Izahay dia eo am-piandohan'ny fiovana ara-tsosialy izay ho hitantsika vokatry ny areti-mandringana manerantany.
NextMapping ™ Blog - Vakio bebe kokoa
94% ny mpitondra eran-tany izay nohadihady dia tsy afa-po miaraka amin'ny fanavaozan'izy ireo fanavaozana.
77% amin'ny mpiasa maniry olona voalohany - faharoa nomerika ho paikady lehibe hanovana ny fandraharahana ho an'ny ho avy.
16% amin'ny orinasa mitatitra izy ireo mahomby amin'ny fanodinana dizitaly ezaka.
Fianarana any Oxford
70% ny orinasan'ireo orinasa dia izy ireo aza manana talenta vonona ho avy.
Ny vitsivitsy amin'ireo mpanjifa tianay dia niara-miasa taminay